सोभियत संघको पतन र बदलिएको विश्व व्यवस्था !
सोभियत संघ सन् १९२२ देखि १९८१ सम्ममा यूरेशियाको ठुलो भूभागमा विस्तृत एक देश थियो । त्यो आफ्नो स्थापना देखी १९९० सम्म साम्यवादी पार्टी (कोम्युनिस्ट पार्टी) द्वारा शासित रह्यो। संवैधानिक रूपबाट सोभियत संघ १५ स्वशासित गणतन्त्रहरूको संघ थियो तर वास्तवमा पुरै देशको प्रशासन र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारको कडा नियन्त्रण रह्यो। रूसी सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र ( Russian Soviet Federative Socialist Republic) यस देशको सबभन्दा ठुलो गणतन्त्र र राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक केंद्र थियो, यसकारण पुरै देशको गहिरो रूसीकरण भयो। यही कारण रह्यो कि, विदेशमा पनि सोभियत संघलाई प्रायजसो गल्लीले 'रूस' भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो।
१९९० : सोवियत कम्युनिस्ट पार्टीमा एक पार्टीको सत्ता अन्त्य गर्न मतदान। बोरिस येल्तसिनद्वारा सोवियत कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त्याग।
स्टालिन र द्वितीय विश्वयुद्ध
स्टालिनको मृत्यु पछी विभिन्न साम्यवादी नेताहरूमा सर्वोच्च नेता बन्ने खींचातानी भयो र निकिता ख्रुश्चेव सत्तामा आए। उनले स्टालिनको सबभन्दा कठोर​ तानाशाही नीतिहरूलाई उल्टाई दिए। सोभियत संघ अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा सबभन्दा अगाडि निक्लियो। १९५७मा उनले विश्वको सबभन्दा पहिलो कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक पृथ्वीको आसपास कक्षामा पुर्याए। १९६१मा सोभियत वायु-सैनिक युरि गगारिन पृथ्वीबाट माथि अन्तरिक्षमा पुग्ने वाला सबभन्दा पहिलो मानव बने।
सोभियत संघको अन्त
अफगानिस्तानमा सोभियत नियन्त्रणको बिरुद्द विद्रोह र गृह युद्ध लगातार जारी रह्यो र अन्तत: १९८९मा सोभियत फौज त्यहाबाट बिना अपना लक्ष्य पूरा नगरी फर्की आयो। देशमा आर्थिक संकट निरन्तर जारी रह्यो र विदेशी सम्बन्ध पनि पेचीलो रह्यो। अन्तिम सोभियत नेता मिखाइल गोरबाचोभले देशमा ग्लास्नोस्त (glasnost) नामक राजनीतिक खुलापनको (perestroika) नामक आर्थिक ढाँचाको बदलने नीतिको अन्तर्गत सुधार गर्ने कोशिश गरे तर विफल रहे। डिसेम्बर' १९९१मा उनको विचारधाराको विरुद्ध राज्यविप्लव (coup d'etat) को कोशिश भयो तर त्यो दबाईयो। यस घटना पछी सोभियत संघ टूट्यो र उसको १५ गणतन्त्र सबै स्वतन्त्र देशको रूपमा अगाडि आए। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीमा रूसलाई सोभियत संघको उत्तराधिकारीको मान्यता दिईयो।
साठी वर्षअघि युक्रेनलाई हस्तान्तरण गरिएको क्राइमिया फेरि रूसमैं गाभिने स्पष्ट संभावना देखिएपछि रूसमा उत्सव मनाउन थालिएको छ। आखिर क्राइमियामा त्यस्तो के छ, जसका कारण रुस पुन: अर्को शितयुद्धकालीन वैमनश्यका लागि समेत तयार देखिंदैछ? पहिलो कारण त ऐतिहासिक नै हो। सन् १९२१ मा सोभियत संघको रुस गणराज्य अन्तर्गत पर्ने गरी क्राइमियालाई स्वायत्त गणराज्यको दर्जा दिइएको थियो।
त्यसबेला एउटै देशका दुई राज्यभित्र भूमिको आदान-प्रदान हुँदा कुनै विवाद भएन। तर जब १९९१ मा सोभियत संघको पतन भयो क्राइमिया स्वायत्त गणराज्यको रुपमा स्वतन्त्र युक्रेनको अंग बन्यो र उसको रुससँगको सम्बन्ध सदाका लागि बिच्छेद भयो।
त्यसरी क्राइमियाका करिव ५८% रुसी मूलका जनतालाई आफूमाथि धोखा भएको र रुसभित्र पनि आफ्नो पूर्खाले पटक-पटक रगत बगाएको माटोलाई सहजै छोडेर ऐतिहासिक भूल भएको भावना प्रबल छ। र, रुस त्यो गल्तीलाई सुधार्न चाहन्छ। दोस्रो कारण, सामरीक हो। तर जब १९९१ मा सोभियत संघको पतन भयो क्राइमिया स्वायत्त गणराज्यको रुपमा स्वतन्त्र युक्रेनको अंग बन्यो र उसको रुससँगको सम्बन्ध सदाका लागि बिच्छेद भयो।
त्यसरी क्राइमियाका करिव ५८% रुसी मूलका जनतालाई आफूमाथि धोखा भएको र रुसभित्र पनि आफ्नो पूर्खाले पटक-पटक रगत बगाएको माटोलाई सहजै छोडेर ऐतिहासिक भूल भएको भावना प्रबल छ। र, रुस त्यो गल्तीलाई सुधार्न चाहन्छ। दोस्रो कारण, सामरीक हो। क्राइमियाको राजधानी सेभास्तोपोलमा अठारौं शताब्दीको अन्त्यदेखि नै रुसको च्योर्नामोर्स्की फ्लोत अर्थात ब्ल्याक सी फ्लिट तैनाथ छ, जसका कारण रुसलाई कृष्ण सागर र भूमध्य सागरसम्म आफ्नो सामरिक शक्तिलाई बिस्तार गर्ने सुविधा मिलेको छ।
युक्रेन स्वतन्त्र भएपछि रुसको नौसैनिक पोतलाई सन् २०४२ सम्म तैनाथ गर्ने द्विदेशीय सम्झौता भए पनि ब्ल्याक सी फ्लिट दुई देशबीच निरन्तर असमझदारीको कारण बनिरह्‍यो। किभमा रुस विरोधी शक्ति हावी हुने बित्तिकै ब्ल्याक सी फ्लिटको भविष्य अन्योलग्रस्त हुने खरतनाक परिस्थिति झेल्दै आएको रुसलाई क्राइमियालाई आफूमा गाभ्नै पर्ने बाध्यता सृजना भइसकेको थियो।
रूस समर्थक राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचको बहिर्गमन, रुसी भाषाको आधिकारिक हैसियतलाई बदर गर्ने पश्चिम-समर्थक नयाँ सत्ताको निर्णय र क्राइमिया लगायत दक्षिण पूर्वी युक्रेनका रुसी मूलका नागरिकहरुको आन्दोलनले रुसलाई त्यो अवसर दिएको छ। अन्य सानातिना आर्थिक कारण पनि छन्। तर, त्यसभन्दा महत्वपूर्ण भने सोभियत संघको पतनपछि रुसी जनतामा एक्लो महाशक्ति बनेको अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई हेप्ने गरेको गहिरो संवेदना पनि छ।
युरोपियन युनियन र उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठननेटोको निरन्तर विस्तारले आफूलाई घेर्दै गएकोमा निकै संवेदशील रुसलाई युक्रेन जस्तो भाषिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक रुपले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको छिमेकमा तिनको उपस्थिति सैह्य हुने सम्भावना नै थिएन। रुस यो आवेगमा क्राइमियामा मात्र सीमित हुनेछ वा रुसी भाषीहरूको बाहुल्य रहेको पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनतिर पनि बढ्ला, त्यसले पुन: सुरु भएको जस्तो देखिएको शितयुद्धको तीव्रता र परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ।